Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Air Astana waxay heshay diyaaraddeeda lixaad ee cusub ee Airbus A321LR
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kazakhstan • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Diyaaradda Airbus A321LR waxay ka hawlgashaa shabakadda caalamiga ah ee diyaaradda, oo leh meelo ay ka mid yihiin Dubai, Frankfurt, London (laga bilaabo Sebtember 2021), Istanbul, Sharm el-Sheikh (Masar) iyo Podgorica (Montenegro).
Air Astana dhammaan duulimaadyadii Airbus A321LR waxaa laga kireeyay Air Lease Corporation.
Airbus A321LR waxaa ku qalabeysan matooradii ugu dambeeyay Pratt & Whitney.
Diyaaradda Airbus A321LR waxay ka hawlgashaa shabakadda caalamiga ah ee Air Astana.
Air Astana oo ah Airbus A321LR-kii lixaad ee cusub ayaa maanta si toos ah uga soo degtay gegida caalamiga ah ee Nuur- Sultan International Airbus ee Hamburg, Germany. Dhammaan duulimaadyada Airbus A321LR waxaa laga kireeyay Air Lease Corporation, iyadoo diyaaraddii ugu horreysay ay timid Sebtember 2019 iyo mid kale oo noocaas ah ayaa la filayaa in la geeyo kahor dhammaadka 2021.
The Airbus A321LR waxaa lagu qalabeeyay matooradii ugu dambeeyay ee Pratt & Whitney, kuwaas oo yareeya isticmaalka shidaalka 20%, kharashka dayactirka 5%, kaarboonka qiiqa 20% iyo heerarka buuqa 50% marka la barbar dhigo jiilkii hore ee diyaaradaha. Qolka waxaa lagu habeeyay 16 kursi oo jiifsan oo fasalka Ganacsiga ah iyo 150 kursi oo ah fasalka Dhaqaalaha, dhammaan kuraasta waxaa lagu qalabeeyay shaashado shaqsiyeed.
Diyaaradda Airbus A321LR waxay ka hawlgashaa shabakadda caalamiga ah ee diyaaradda, oo leh meelo ay ku jirto Dubai, Frankfurt, London (laga bilaabo Sebtember 2021), Istanbul, Sharm el-Sheikh (Masar) iyo Podgorica (Montenegro).
The Hawada Astana Kooxdu waxay ka shaqeysaa 35 diyaaradood oo ka kooban 15 Airbus A320/A320neo, 12 Airbus A321/A321neo/A321LR, saddex Boeing 767 iyo shan Embraer E190-E2, oo wadar ahaan ay ku jiraan sagaal A320 iyo hal A320 neo oo leh qeybta LCC, FlyArystan. Celceliska da'da maraakiibta Air Astana waa saddex sano oo kaliya, taasoo ka dhigaysa midda ugu da’da yar adduunka.